Ducadii Saint Helena ee Quusta iyo? Ku xidh jacayl
Ducada Saint Helena Inaad ka quusato nin oo aadan waligaa ka tagin, marna kama fogaanayso inaad noqoto qof kaligiis ah ama ficil aan micno lahayn, waxay noqon kartaa codsi quus ah, laakiin waxaa lagu sameeyaa jacayl iyo baahida loo qabo in lagu celiyo.
Dadbadan waxay moodayaan in salaadu ay waqti lumayso, laakiin runtu waxay tahay inay ka warqabaan awooda ficilkan uu nagu hayo iyo waxa nagu wareegsan.
Saint Helena waxay ahayd haweeney sida qof kasta oo kale ah oo ku dhibaataysan dunidan adduunyo dhinacyo badan waana sababtaas sababta qof ka wanaagsan iyada mooyee aanu kor ugu qaadno salaaddayada, kuwa wadnaha ku lugta leh, taas oo aan ku waydiinayno qof kale barta Romantic ama lammaane arag.
1 Ducada Saint Helena
1.1 U soo ducee Saint Helena inuu nin niyad jabiyo oo uusan waligii ka tegin
1.2 Salaadda Saint Elena inay iga fikirto oo ay ii yeedho
1.3 Ducada loo diro Saint Helena si jacaylka loogu xiro
2 Ma u baahanahay inaan laambad shumac u tukado?
Dadbadan baa u garanaya iyada Santa Elena ama sida Elena oo ka tirsan Constantinople laakiin magaceeda dhabta ahi yahay Flavia Julia Helena waxayna ahayd haweeney boqortooyo ka ahayd Rome oo looga dhawaaqay Saint of the Catholic, Orthodox iyo Lutheran Church.
Qoduuskaani wuxuu ahaa kii keenay amiirka adduunka oo xorriyadda siiya dadka masiixiga ah ee ahaa cadaadiskii ugu dheeraa ee diimeed ee taariikhda.
Elena, iyada oo ninkeeda laga diidey waxay ku nooleyd nolol quduusnimo ah oo xanuun iyo silica ay ka buuxaan jacayl aan waligii lagu soo celin.
Jirdilkan Santa Elena wuxuu socday afar iyo toban sano ay ku nooleyd iyada oo dayacan oo meel iska dhigaysa iyada oo aragtay ninkeeda oo raalli ka ah naag kale oo dabaq ka hoosaysa.
Waxay ahayd shahiid tusaale u noqotay xoog iyo caawimaad dad badan oo laga yaabo inay naftooda ku helaan xaalado la mid ah.
U soo ducee Saint Helena inuu nin niyad jabiyo oo uusan waligii ka tegin
Quruxda badan ee Saint Helena, oo ah kuwa ilaah jecel, waxaan u imid inaan kaa codsado inaad igu siiso naxariisteyda weyn, taas (qofka magaciisa) waligaa ha iga tegin, ha eegin haweeney kale, shaqada, dariiqa iyo meelkasta oo aan ka sii fekero nafsadeyda, jirkayga iyo naftaada… Dabeecad ahaan, waxaan kugu leeyahay awood adiga.
Santa Elena, jacayl xoogan, ha siinin xasilloonida maskaxda, inuusan ka tagin fikirradiisa, in magacaygu dhibayo oo uusan keligiis isaga tagin, oo uusan mar dambe dooneynin bushimo kale aniga oo keliya, in rabitaan kasta oo jireed uu mid kale u dhinto. Haweeney, aniga kaliya ayaa i dareemi karaa farxad maxaa yeelay waan isku xir xiray.
Oh Saint Elena, waxaad ka caawin doontaa inaad igu guuleysato qalbigaaga mar labaad, sumcaddaada iyo dabeecaddaada sii joojiso, jooji abuuristaada, ha (...) ogaato inay aniga igu leedahay, samir luminta haddii ay la mid tahay midka kale, khayaaliga iyo Rajadu waxay ku jirtaa jacaylkayga xagga (...).
Miyaad jeceshahay ducada xoogga leh ee Saint Helena inaad ka quusato nin oo aadan weligeed ka tagin?
Ku noolaanshaha isla saqafka wehelkaaga oo aan na siin wax xasillooni shucuur leh waa mid ka mid ah shirqoollada ugu adag uguna caansan ee ku nool guryaha maanta.
Xiriirradaas jacayl iyo kalgacayl ay ka tageen sariirtii sokeeye ee xiriirka ayaa noqotay hadda meel qabow oo aan degganayn halkaas oo shaki la’aanta iyo degganaantu ay tahay waxa ka jira dhammaan deegaannada guriga, iyaga oo wax walba ku dhex arkaa tabar xumo. Waxay wasakheeyaan deegaanka.
Xaaladahaas meesha Ducadu waxay noqotaa meesha kaliya ee aan ka baxno Waa halka ay salaadda Saint Helena noqoto mid awood leh.
Salaadda Saint Elena inay iga fikirto oo ay ii yeedho
Saint Helena sharafta leh, inaad tagtay Kalluun oo aad keentay saddex ciddiyood.
Mid ka mid ah waxaad siisay wiilkaaga Konstantiniska, tan kalena waxaad ku tuurtay badda dhexdeeda, si ay bad-maaxiintu u helaan caafimaad, midka saddexaadna wuxuu ku qaadaa gacmahaaga qaaliga ah.
Saint Helena, Aniga (magacaaga) ayaa kaa codsanayaa inaad i siiso ciddkan saddexaad, si aan u geliyo qalbiga (magaca aad jeceshahay), si aanan u helin nabad iyo nabad ilaa iyo inta aanan u imanin inaan noolaado, inta Ha i guursan oo sheeg jacaylkaaga qumman.
Ruuxiyada iftiinka ee nafsiiya nolosha, iftiimiya qalbiga (magaca kuwa aad jeceshahay), si had iyo jeer uu i xusuusto, uu ii jeclaado, ii caabudo oo uu ii doono, iyo wax kasta oo uu i siiyo, oo ay ku maareeyaan awoodahaaga, Saint Helena, waxaa laga yaabaa inuu noqdo addoonsiga aan jeclahay.
Nabadda iyo wada noolaanshahaasi ma haysto illaa uu ka yimaado inuu ila sii joogo, oo uu ila noolaado, anigoo ah gacaliyahayga, jacaylkayga iyo dookhayga. Aamin ii ah sida eey oo kale, oo isxiisaya sida wan oo kale, oo u dhaqso sida malaa'ig, in (magaca aad jeceshahay) ay si deg deg ah iigu timaaddo, iyada oo aan jirin wax xoog ah oo xagga jidhka ah ama ruux ahaaneed ah oo joojin kara.
Maydkiisa, naftiisa iyo ruuxiisuba ha yimaadaan, waayo waxaan u yeeraa oo dhiirrigeliyaa oo xukumaa isaga. Ilaa inta uusan noqon qof dabacsan oo xamaasad leh, oo isu dhiibaya jacaylkayga, damiirkiisu ma siin doono nabad. Hadduu been sheegayo, haddii uu aniga i khiyaaneeyey, ha iga raalli-geliyo dhibaatada i gelisay.
(Magaca kuwa aad jeceshahay) ayaa kuu imanaya maxaa yeelay adiga ayaan kuu yeerayaa, waxaan kugu amrayaa inaad si dhaqso leh iigu soo noqo (magacaaga), xagga awoodayaasha Saint Helena iyo malaa'igaha ilaaliya.
Sidaas ha noqotee, oo sidaasay ahaan doontaa!
Iimaan leh salaadda oo dhami way xoog badan yihiin iyo tukashada Saint Elena inay ka fekerto aniga oo ay i soo wacdo waa isku mid.
Sameynta tan iyo dhammaan salaadda qalbiga ayaa ah habka ugu fiican maadaama dareenka iyo walaacyada aan ku hayno qoto dheer ee nafsadeena ay muuqato.
Weydii inuu ka fikiro aniga maahan hab lagu xakameeyo fikradaha qof kale laakiin waa dariiqo ah ilaali midnimada xiriirka.
Awoodda wanaagsan ee aynaan siinno marka aan ducaysanno kadib waxay hubaal ahaan gacan ka geysaneysaa hagaajinta jawiga deegaankeena.
Weydiinta Santa Elena inay na caawiso si qofkaas khaaska ahi uusan u joojin karin ka fikirka annaga ilaa heer loo baahan yahay in injineer wax laga qabto xitaa haddii ay tahay khadka taleefanka waa mid ka mid ah salaadaha inta badan maanta la tukado.
Gurigu wuxuu bilaabaa inuu buuxiyo nabadgelyo waxyarna xaaladdu waxay bilaabmaysaa inay noqoto jawaabta aan sugaynay.
Ducada loo diro Saint Helena si jacaylka loogu xiro
Oh sharaf leh Santa Santa Elena, maanta waxaan kuugu imid kalsooni buuxda iyo rajo, inaad iga caawiso soo kabashada (magaca qofka) ee aan jeclahay, waad ogtahay mustaqbalka iyo kan hada jira, waxaan kaa baryayaa inaad aragto noloshayda, sameyso ( ...) ka fikir oo garow khaladaadka.
Saint Elena barakeysan, naxariistaada aan dhamaaneyn, waxaad iga caawisaa inaan deg deg ugu helo qalbigeyga, inaan soo cesho qofka aan jeclahay, waad ogtahay dareenkeyga inuu daahir yahay oo daacad ah, qalbigaaga jilci si aad u ogaato sida loo qiimeeyo jaceylka.
Santa Elena, hooyo tusaalayaal ah, Masiixi ah oo kaamil ah, (...) ma ahan qof xanaaq badan, maankeeda ku iftiimiya, dib uga fiirsada, jacaylka wax walba waa laga adkaan karaa, kana fogaan kartaa saameynta xun ee maskaxdeeda khalkhal gelineysa, way qaldantay, way ka tagtay Qofka ugu yar ee tilmaamaya, oo guriga ku soo noqonaya (...), adiga ayaan ku sugaynaa.
Oh Saint Elena ee iskutallaabta, Waan ogahay inaad wax walba sameyn karto, igama dayn doontid, codkayga ma dhageysan doontid, codkeyga salaaddayda oo baryadayda baryadayda aqbal.
Tani duco Santa Elena si ay u xidho nin waxaa lagula talinayaa kiisaska halkaas oo mid ka mid ah labada qof ee ku lugta leh xiriirka u maleeyaan inuu ka tagayo ama muujiyo xoogaa shaki ah oo bilaaba inuu jebiyo aasaaska adag ee xiriirka keenaya isku-buuq, dagaalo, raaxo darro iyo isku dhacyo ka dhaca guriga .
Taasi waa waxa salaadda taraafikada ah ay ku saabsan tahay, in qofka kale ee si lama filaan ah aan go'aan loo gaarin, uu nala sii joogo laakiin aan ka soo horjeedin doonistiisa laakiin uu ku qanacsan yahay in joogitaanku uu yahay ikhtiyaarka ugu fiican sidaas darteedna la beddelo fikradda ka bixista guriga. .
Ma u baahanahay inaan laambad shumac u tukado?
Waxaan kugula talineynaa taas shumac shumac ah bilowga ama dhammaadka salaadda Saint Helena Si aad u niyad jabto oo aad jacaylka u xirto.
Shumaca waa astaan ​​mahadsanid. Waxaan uga mahadcelineynaa sheygan xoogga badan dhammaan caawimaheena nolosheena,
Ku soo ducee rumaysad badan iyo jacayl badan.